Guubie: ဒေါ်လာ ၅၉ နှစ်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်း Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, စက်တင်ဘာလ 26, 2013 သောကြာနေ့, ဇွန်လ 19, 2015 Douglas Karr
Guubie beta ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၅၉ ကျသင့်သောအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုအရှိန်မြှင့်နိုင်မည်ဖြစ်သည် Mandrill ၏အီးမေးလ် API။ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီများသည်ပြိုင်ပွဲထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။ ဥပမာ၊ ဒီဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ၊ ငါတို့ရဲ့အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ငါတို့ထက်နှစ်ဆပေးဆပ်ခဲ့ရတယ် Premiere hosting.
အဆိုပါ Guubie အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းတွင်
အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများ - သင်၏သုံးစွဲသူများထံသို့အမှန်တကယ်ပေးပို့နိုင်သည့်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ပါ။ လူတွေကိုသင်၏အကြောင်းအရာကိုဖတ်ရန်နှင့်အီးမေးလ်နှင့်လူမှုကွန်ယက်များမှတဆင့်ဆက်သွယ်ပါ။ တုန့်ပြန်သောအီးမေးလ်တင်းပလိတ်များနှင့်ပါ ၀ င်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအီးမေးလ်များကိုပို့ပါ။
အမြင့်ပေးပို့နိုင် - Guubie ကို Mandrill, MailJet, Amazon SES သို့မဟုတ်အခြား SMTP ကဲ့သို့သောသင်နှစ်သက်သောအီးမေးလ်ပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုသို့ဆက်သွယ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် Mandrill ကိုသုံးလျှင်တစ်လလျှင်အခမဲ့အီးမေးလ် ၁၂၀၀၀ အထိပေးပို့နိုင်သည်။
အဆင့်မြင့်အစီရင်ခံစာများနှင့်အခြေအနေများ - သူတို့သုံးပါ analytics သင်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုပေးရန်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတိုင်းအတွက်သတင်းပို့ပြီးဂူဂဲလ် Analytics နှင့်ပေါင်းစပ်ပါ။
A / B ကိုစမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် ROI ပိုမိုကောင်းမွန်သည် - သင်၏သုံးစွဲသူများထံပေးပို့ရန်အထိရောက်ဆုံးသောသတင်းကိုရှာဖွေနိုင်စေရန်အကန့်အသတ်မဲ့ A / B စစ်ဆေးမှုများကိုပြုလုပ်ပါ။
Browser & Mac OSX / Windows App - Firefox, Safari သို့မဟုတ် Google Chrome ကဲ့သို့သောစံသတ်မှတ်ထားသောဘရောင်ဇာတစ်ခုဖြင့်သင်သည် Guubie နှင့်၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုကမ္ဘာတွင်မည်သည့်နေရာ၌ပင်ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုခွင့်ကိုရယူလိုပါက Mac OSX သို့မဟုတ် Windows အတွက် Guubie အက်ပ်ကိုလည်းဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။
လုပ်ရပ်များအပေါ်အခြေခံပြီးအစပျိုး - အသုံးပြုသူအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပြီးနှစ်ရက်အကြာတွင်သင်၏အသင်းဝင်များသို့ပျော်ရွှင်စွာမွေးနေ့ပေးပို့ရန် (သို့) ဒုတိယကြိုဆိုသည့်အီးမေးလ်ကိုအလိုအလျောက်ပေးပို့ရန်အစပျိုးနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတာဝန်များကိုအလိုအလျောက်။
developer များနှင့် startup များအတွက် API - Guubie တွင်အားကောင်းသော XML API ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ developer များသည်သူတို့၏ platform နှင့် service များကို Guubie account နှင့်အလွယ်တကူပေါင်းစည်းနိုင်သည်။
နှင့် Guubieသင်တစ်နှစ်၊ နှစ်စဉ်ကြေးပေးရ၊ $ 59!
26:2013 pm တွင်စက်တင်ဘာ 4, 19 မှာ
တစ်နှစ်လျှင်အရုပ် ၅၉ လုံးသည်စျေးပေါ။ ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်လျှင်ခိုးသည်။ ဒီပိုသေချာပေမယ့်စိတ်ဝင်စားဖို့ဒီသို့ကြည့်ရှုရန်ရှိသည်သွား။